About Us - Shiinaha Kanaif tuubooyin Systerm Ltd
K & F gaaban for "Key oo adag", taas oo astaan ​​muhiim ah oo suga. In kastoo wax soo saarka ee K & F yihiin qaybo injineernimada keliya Dhicin, ay yihiin qaybaha muhim. Sida a tuubooyin qeybiyaha mudnaan gaar ah, K & F ayaa ku saabsan tayada alaabooyinka sida xaalada sal ay u noolaadaan tan ah abuuritaanka iyo dadaalaya in ay soo saaraan waxyaabaha kaamil ah, sidaas bixinta tuubbooyin oo tayo sare leh si ay macaamiisha.
K & howlgalka F waa "In la abuuro dareen wanaagsan oo guriga"! K & F xajiya horumarinta raaxo leh, deegaanka, tamar-ku badbaado, waxyaabaha ammaan ah oo ku haboon, si ay u siiyaan updated iyo dhaqamada wanaagsan iyo hab-nololeedka dadka iyo sidoo kale loo fududeeyo kumanaan qoys in ay helaan nolol farxad. Dhanka kale, K & F fiican u oofin shaqaalaha, la-hawlgalayaasha, saamiyada iyo bulshada ay. Si kastaba ha ahaatee, K & F si cad u og yahay in kaliya marka dareenkooda macaamiisha guriga si fiican, ganacsi si fiican u horumarin karaan, si ay dareenkooda noo gaar ah ee guriga noqon doontaa si fiican iyo sidoo!
▪Vision ee K & F-Si ganacsi oo heerka koowaad ee mudan! 1. Si qaataan masuuliyada bulshada iyo sidoo kale si adag u dhammaadaan ku dadaalaan in ay ajende liability wax soo saarka, masuuliyada shaqaalaha, liability deegaanka, liability canshuurta iyo wixii la mid ah; raacaan xukunka iimaanka wanaagsan, anshaxa iyo ganacsiga bulshada anshaxa; si firfircoon uga shaqeeyaan dabcan daryeelka dadweynaha; 2. hab maamul Standard, maamulka hawlgalka baaluq, qaab ganacsi aad u fiican iyo koox shaqaale aad u fiican, in uu noqdo tusaale iyo model ah shirkadaha Shiinaha, 3. Samee brand ugu horeysay ee alaabta gacanta dab Chinese iyo brand xiriir biibiile caanka ah ee caalamiga ah, 4. Gaaraan xaaladda guul-guul la xisbiyada la xiriira: dhergin macaamiisha, shaqaalaha, la-hawlgalayaasha, bulshooyinka iyo saamileyda.
▪Values ​​ee K & F-Products, anshax shirkadda iyo shakhsiyadda. K & F waa in aan ku siin kaliya ee wax soo saarka ugu fiican si ay macaamiisha, laakiin waa in sidoo kale noqon shirkad mudan. Waxaa intaa dheer, K & F waa in ay caawiyaan shaqaalaha hesho karti, Daacadnimo iyo guusha, si wax soo saarka, anshax shirkadda iyo shakhsiyadda ka koobnaan doonaa brand K & F, midba midka kale ku darsato oo ciduna ma bixin karo la. Kaliya marka ay saddex kasta oo kale oo kor u shaqada iyo aragtida ee K & F ee lagu xaqiijin karaa.
▪Spirit ee K & F-Daahirinta, iskaashi iyo waxbarasho. furitaankii cusub waa xeerka anshaxa, furitaankii saldhig u ah badbaadada; furitaankii waa dareen xoog badan oo ah mas'uuliyad, ruuxa ganacsadaha iyo dareen shaqada; furitaankii waa in ay diidaan oosa iyo heer raacdada; furitaankii waa inaan sameeyo sida ugu fiican marka aad loo dhiibtay wax iyo in ay isku dayaan in ay sameeyaan wax sax ah in hab aad u wanaagsan marka aan la aaminay aad wax. Iskaashi, sida ay magaca uu tusinayaa, waxay ka dhigan tahay wada shaqayn, oo waxa loola jeedaa iskaashi heer sare iyo iskaashiga wanaagsan. Study waa lagama maarmaan u ah badbaadada iyo horumarinta, taas oo looga baahan yahay ee Zaman iyo halka uu hal-abuurnimo. Shaqaaluhu waa inay noqon nooca-waxbarasho individualizes, halka K & F waa in ay noqdaan urur waxbarasho-oriented ah. Innovation Nolosha dhaw ee shirkadda oo ah isha ugu of tartan iyo sidoo kale gool kama dambaysta ah ee waxbarasho. K & F dhiiri horumar soo jeedinta iyo wax fikirka aan caadi ahayn laakiin cajiib ah, K & F qaadeysaa dayashada hal abuur iyo guulaha asalka ah. K & F waa in laftiisa loo diido, si ay u wanaagsan laftiisa dhaafo.
▪Company Philosophy: 1. Style ee K & F: jawaab degdeg ah oo tallaabo degdeg ah! K & F diido marmarsiiyo. Ayado this la xawaaraha si dhakhso ah, "hakiyo" waxaa loola jeedaa wax kale ma aha, laakiin "sugaya dhimasho". Sidaas waxa aan wali sugayaan? 3. Saddex nidaamo ee K & F: No tricks, fursad lahayn, ma khiyaameeyay on sancada iyo qalabka! Saddexdan nidaamo jira saddex lines digniin jookarka, kuwaas oo ah shuruudaha aasaasiga ah ee anshaxa xirfadeed ee shaqaalaha K & F ee, heerarka muhiimka ah ee shakhsiyadda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee daacadnimada. 3. Saddex xukumaya shuruudaha la sameeyo: haddii dhaqanka faa'iido u leh horumarinta ganacsiga; haddii anshaxa sahla kor u daacad macaamiisha; in dhaqanka waa ay guushu ku miisaamo danaha xisbi kasta. mode 4. fakaraya K & F: Waxaan nahay isha wax walba! 5. K & iimaan F ee: annagaa u fiican! 6. K & F ee habdhaqanka shaqada: Ma fiican la full of hamiday! Ra'yiga 7. K & F ee kooxda: K & F waa hal koox oo kaliya ay jirto "anaga", laakiin ma jirto "adiga" ama "iyagu"!